တံခါးကိုဆက်စပ်ပစ္စည်း, Automatic တံခါးကိုပစ္စည်းများ, အမြင့်မြန်နှုန်းတံခါးကိုဆက်စပ်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူများနှင့်တရုတ်နိုင်ငံအတွက်ပေးသွင်း
Home > ထုတ်ကုန်များ > တံခါးကိုဆက်စပ်ပစ္စည်း
တံခါးကိုဆက်စပ်ပစ္စည်း ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, တံခါးကိုဆက်စပ်ပစ္စည်း, အလိုအလျောက်တံခါးပစ္စည်းများ ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းတံခါးဆက်စပ်ပစ္စည်း R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
တံခါးဖွင့်အော်ပရေတာဆွဲယူ high စွမ်းဆောင်ရည်မှာ Automatic အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အလိုအလျောက်တံခါးသည် Servo မော်တော်ပြီးတော့ထိန်းချုပ်ရေး Box ကို အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Hofic အလိုအလျောက်တံခါးမော်တော်ပြီးတော့ထိန်းချုပ်ရေး Box ကို အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အမြင့်မြန်နှုန်းတံခါးသည်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး Airbag အာရုံခံအသုံးပြုခြင်း အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
System ကိုမော်တော်နှင့် Servo Controller အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အလိုအလျောက်အမြင့်မြန်နှုန်းတံခါး Radar အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အလိုအလျောက် Fast တံခါး induction Radar အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အလိုအလျောက် Fast တံခါး Radar အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
24GHz အလိုအလျောက်တံခါး Radar အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အီလက်ထရောနစ် 24GHz အလိုအလျောက်တံခါး Radar အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
တံခါးကိုဆက်စပ်ပစ္စည်းအော်တိုတံခါးကိုပစ္စည်းများ, မြန်နှုန်းမြင့်တံခါးကိုမော်တာနှင့်ထိန်းချုပ်မှု box ကိုမြန်နှုန်းမြင့်တံခါးကိုဆက်စပ်ပစ္စည်းများ, အခြားတံခါးကိုဆက်စပ်ပစ္စည်းများပါဝင်သည်။ ကျနော်တို့ကဤ accessories များမဆိုအစိတ်အပိုင်းများရောင်းနိုင်ပါတယ်။
အလိုအလျောက်တံခါးကိုပစ္စည်းများ: ကျွန်ုပ်တို့၏အလိုအလျှောက်တံခါးကိုပစ္စည်းများ 1 မော်တာ + ဂီယာလျှော့ချ, 1 ခါးပတ်,7မီတာ, 1 ပျင်းရိစက်သီး, microprocessor, ရထားအပြာဘီး4အစုံ, ကြမ်းပြင်လမ်းညွှန်များ2စုံ, အဝေးထိန်း 2pcs,2စုံကိုခါးပတ်ညှပ် mounting ကွင်းခတ်ပါဝင်သည် , 1 power supply ကကြိုးများနှင့်ကေဘယ်လ်ကြိုး connectors,2တည်နေရာ, အဘယ်သူ၏အရှည် 2,08 မီတာ,3မီတာ, ဒါမှမဟုတ်4မီတာဖြစ်ပါတယ်လူမီနီယမ်လမ်းကြောင်း။ ကျနော်တို့လူတွေအဆင်ပြေများကိုဒီဇိုင်းရေးဆွဲလျက်ရှိသောအော်တိုတံခါးကိုဖွင့်လှစ်တဲ့ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ကြသည်။ ဝန်ဆောင်မှု၏အဆင့်များကိုအလိုအလျောက်တံခါး Systems` drive ကိုဒါပေမယ့်အလိုအလျှောက်တံခါးများ ပို. ပို. လူကြိုက်များဖြစ်လာကြပြီရတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အလိုအလျှောက်လျှောတံခါးကိုစနစ်များ, ခေတ်သစ်အာကာသ-saving နှင့်ကြော့ဖြစ်ကြသည်။ အလိုအလျှောက်အပြည့်အဝဖွင့်လှစ်အကျယ်နှင့် / သို့မဟုတ်လျှော့ချဖွင့်လှစ်အကျယ်နှင့်အတူ mode ကို, သာအသွားအလာထိန်းချုပ်ဘို့ထွက်ပေါက်: အလိုအလျောက်လျှောတံခါးများပါဝင်သည်အချို့သောအရာများစွာကိုအခြေခံလုပ်ဆောင်ချက်များကိုရှိသည်။ အလိုအလျှောက်တံခါးများဖွင့်ပွဲကိုလည်းဖွင့်လှစ် width ကိုသေးငယ်သို့မဟုတ်ပိုကြီးအောင်ချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်။ လူပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်အရာဝတ္ထုအတွက်ထောက်လှမ်းဇုန်၌ရှိကြ၏လျှင်ထိုကဲ့သို့သောဘေးကင်းလုံခြုံမှုအာရုံခံကိရိယာအဖြစ်အရေးကြီးဘေးကင်းလုံခြုံမှုလုပ်ဆောင်ချက်များကိုပိထဲကနေတံခါးကိုတားဆီး။ တံခါးကိုအရွက်ဘယျလိုမှမဖြစ်ကြပါလျှင်မဖွင့်တဲ့အခါမှာပိတ်ပြီးသောအခါသူတို့ချက်ချင်းပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ထားပါသည်သို့မဟုတ်တံခါးကိုအရွက်နှောင့်နှေးနေလျှင်, သူတို့ကတစ်ဦးကိုချက်ချင်းဘေးကင်းလုံခြုံမှုအလိုအလျောက်နောက်ပြန်ဆုတ်ယန္တရားအားဖြင့်ရပ်တန့်နေကြပါတယ်။
မြန်နှုန်းမြင့်တံခါးကိုမော်တာနှင့်ထိန်းချုပ်မှုသေတ္တာ: ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီဂျာမန်ချုပ်မော်တော်, ဂျပန်မစ်ဆူဘီရှီ Controller ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ် Hofic servo motor ကိုနှင့် controller ကို။ တရုတ်နာမည်ကြီးအမှတ်တံဆိပ် SEJ မော်တာများနှင့် Holip controller ကို။ ဂျာမန်ချုပ်မော်တော်နဲ့ဂျပန်မစ်ဆူဘီရှီ Controller: ဒါဟာချုပ်မှာသင့် application များအတွက်စံပြစွမ်းအင်ထိရောက်မော်တာကိုရှာဖွေရန်လွယ်ကူသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုလှိမ့တံခါးဝ servo ထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကမြင့်မားသောအမြန်နှုန်းနှင့်မြင့်မားသောအသုံးပြုမှုပျော့နဲ့ Hard လှိမ့တံခါးဝသင့်လျော်သည်။ မြေတပြင်လုံးစနစ်, တစ်အသေးစားနှင့်အလင်းအထုပ်ထဲမှာတည်သည်ကမြင့်မားသော torque နှင့်မြင့်မားသော Operating အမြန်နှုန်း, နိမ့်သံ, မြင့်သောယုံကြည်စိတ်ချရချောမွေ့နှင့်ပျော့ပျောင်းတဲ့ operating ခါးဆစ်ရှိပါတယ်, မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းနှင့်အသုံးပြုမှုပတ်ဝန်းကျင်များအတွက်သင့်လျော်သောရမှာပေါ့။ SEJ မော်တာများနှင့် Holip controller ကို: သံလိုက်ဘရိတ်နှင့်အတူသုံးအဆင့်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းမော်တာကျယ်ပြန့်အသုံးပြုမှုရှိပါတယ်, ဒါဟာအမျိုးမျိုးသောစက်မှုအဓိက Drive နှင့်အရန် drive ကိုသင့်လျော်သည် ဖြစ်. , အမျိုးမျိုးသောလိုအပ်သောလျင်မြန်စွာရပ်တန့်မှန်ကန်သော positioning ကိုအတွက်လည်းအသုံးပြုပါသည်။
မြန်နှုန်းမြင့်တံခါးကိုဆက်စပ်ပစ္စည်း: မောင်းနှင်သည့်စနစ်: အမြင့်မြန်နှုန်းတံခါးကို Servo System ကိုမော်တာနှင့်ထိန်းချုပ်မှု, မော်တာ SNMA / SEJ + လျှော့ချ + အနားကွပ် + အန်ကုဒ် + ထိန်းချုပ်သေတ္တာ။ သည်အခြားဆက်စပ်ပစ္စည်း: စည် ;; လှိမ့ပြွန်, ဘက်အဆုံးအဖုံးများ, သံမဏိအဖုံးများအတွက် s ကိုဖြစ်လယျပိုငျးအလူမီနီယံဘား, အောက်ခြေလူမီနီယံဘား, လူမီနီယံဒေါင်လိုက်လမ်းကြောင်း, သံမဏိဒေါင်လိုက်လမ်းကြောင်း, စုတ်တံ, ပတ်ပတ်လည်နိုင်လွန်ချွတ်, PVC လိပ်, လှိမ့သံမဏိပြွန်ပြည့်စုံ, သံမဏိပြွန်, လေအိတ်အာရုံခံစနစ်, ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအလင်းရောင်ခြည်, မိုက်ခရိုဝေ့အာရုံခံကိရိယာ 24 Gigahertz, PVC ဂဟေဆော်စက်, မီးခိုးများနှင့်မီးအာရုံခံကိရိယာများ, PVC ပွင့်လင်းင်းဒိုးသံလိုက်ကွင်းဆက်, photocell, ဝေးလံခေါင်သီထိန်းချုပ်မှု, လက်စွဲစာအုပ်တွန်းအားပေးခလုတ်ကို, အသံသတိပေးနှိုးဆော်သံဆီမီးခွက်အသွားအလာအလင်းဦးဆောင်ပြီး ။
အခွားသောတံခါးကိုဆက်စပ်ပစ္စည်း: section တံခါးကိုဆက်စပ်ပစ္စည်း: မော်တာ 220V-380V, ထိန်းချုပ်မှု box ကိုနွေဦးချိုးကိရိယာ cable ကိုချိုးကိရိယာလူမီနီယံအလွိုင်းကြိုးစက်သီး, ပိုကောင်းရိုးကွန့်ကွင်း, လေအိတ်စနစ်, duplex တိုးမြှင့်လမ်းညွှန်ဘီး bracket က။
တံခါးကိုဆက်စပ်ပစ္စည်း အလိုအလျောက်တံခါးပစ္စည်းများ မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းတံခါးဆက်စပ်ပစ္စည်း လျှောတံခါးအော်ပရေတာ roller Shutter တံခါးလူမီနီယမ်ပစ္စည်း